Gudoomiye Cabdirashiir Shariif oo Waraysi Siiyey BBC – Rasaasa News
Gudoomiye Cabdirashiir Shariif oo Waraysi Siiyey BBC
Gudoomiye xigeenkii ururkii ONLF ee nabada qaatay oo waraysi siiyey ideecada BBC-da isaga oo jooga dalka Jarmalka, isaga oo sheegay in ay ka dhigeen magaalada Stuttgart xaflad lagu xusuusanayey heshiiskii ay Ethiopia la saxiixeen sanadkii hore.
Garabkii ONLF, ee nabada qaatay ayaan shanqadhiisa la maqal tan iyo intii uu heshiiska la galay dawlada Ethiopia, waxaase uu sheegay Cabdirashiid in gudoomiyihii ururka uu ku sugan yahay Addis Ababa hawlana ka hayo. Cabdirashiid ma uusan sheegeen hasha uu u joogo Addis Ababa gudoomiyahii ururku.
Cabdirashiid ayaa sheegay in heshiiskii ay galeen uu keenay guulo badan oo u soo hoyday degaanka Somalida Ethiopia sida nabad galiyada oo uu is badal ku yimid, maxaabiis 1700 ah oo la siidaayey iyo shaqaalayn dhalinyar hore uga tirsanayd ciidamadii Jabhada.
Dawlada degaanka ayaa shaqaalaysay xubnihii ururka ugu muhiimsanaa kuwaas oo ka tirsanaan jiray golaha dhexe joogayna dalka gudihiis sida Cabdiraxmaan Sooyaan oo noqday gudoomiye ku xigeenka hogaanka nabad galiyada ee degaanka Somalida Ethiopia horena u ahaa hogaanka loogistik ee ururka ONLF.
Xubnaha ONLF ee la shaqaaleeyey waxaa ka mid ah Dhiire Caafi, Cabdulahi Qaaje, Daahir Private, xaan Cabdi Kaahin iyo xubno kale oo dhawra ah oo dhamaantood ahaan jiray golaha dhexe ee ONLF.
Waxaa kale oo Addis Ababa joogaa Gudoomiyihii ururka iyo xubno kale oo dhawra ah oo aan wali la cadaynin in degaanka laga shaqaalayn doono iyo in ay ku noqon doonaan dibada oo ay kolkii hore ka yimaadeen.
Xaqiiq waxaa ah in ururka oo la quudhsanayey xiligii uu nabada qaadanayey uu keenay isbadal ka balaadhan kii la moodayey, taas oo ay ugu wacan tahay rabitaanka dadweynaha degaanka iyo dadaalka dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaadna moodaa in shanta sano ee soo socta uu isbadali doonto nolosha dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia, maadaama ay Ethiopia tahay wadanka sadexaad ee dhaqaalihiisu si xawliya u korayo, waxaa ka horeeya oo kaliya dalalka China iyo India.
[mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/shariifali.mp3]
Shir Beeleed Axadii ka Dhacay Guriga Jwxo-shiil